lagu Archives – Axadle
AUN Hogaamiye Cali Mahdi oo lagu aasay magaalada
Xasan Xundubey Jimcaale Sii hayaha Wasiirka Amniga ee Dowlada KMG ayaa ka hadlay aaska AUN Cali Mahdi Maxamed Madaxweynihii 4-aad ee Soomaaliya oo maanta lagu aasay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Xundubey wuxuu sheegay in dadaalka guddigii loo xilsaaray aaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay fududeysay masuuliyadii laga sugayay dhowr meelood sida meydka oo la qaado, aaska iyo aaska. Ku simaha Wasiirka Amniga ayaa shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyey dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen waddooyinka ay xireen…
Khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday Gudoomiyaha
Ugu yaraan seddex askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, sida ay Axadle u sheegeen saraakiisha amniga Soomaaliya. Qaraxa ayaa lala eegtay gaari uu la socday guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, Cabdullaahi Shilow. Qaraxa oo laga maqlay qeybo ka mid ah caasimada ayaa ka dhacay agagaarka Hotel Guuleed. Waa qaraxii labaad oo noociisa ah oo ay Al-Shabaab maanta ka geystaan…
Tahriibayaal ku nafwaayey Dooni ku qalibantay Xeebaha Tunisia
Dowlada Tunisia ayaa sheegtay in la helay meydadka 20 muhaajiriin ah, halka kooxaha gurmadka ay raadinayaan dad kale oo ilaa iyo hada aan la ogeyn. Saraakiisha dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaas ay ka baxeen mid ka mid ah xeebaha dalka oo ay si dhuumaaleysi ah ay doonayeen in ay ku galaan dalka Talyaaniga, maadaama dekedda Liibiya ay ka taagan tahay dhibaato. Ciidamada ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in doonta iyo meydadka ay dul sabeynayeen biyaha, halka qaarkoodna ay ku soo adeen dhanka xeebta …
Taliska Booliska Boosaaso ayaa sheegay inay soo saareen Miino dhulka lagu aasay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ay ku guuleysteen soo saarida miino lagu aasay mid kamid ah wadooyinka magaalada. Ciidankan oo helay xog ku saabsan miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa ay sameeyeen howl gal daqiiqado qaatay ugu dambeyntiina waxa ay ka soo saareen bambkii, sida uu sheegay Taliska Booliska Boosaaso. Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Bari ayaa dhankiisa sheegay in Qaraxyada Al-Shabaab iyo Daacish la doonayay in lagu waxyeeleeyo dadka…